Faah-faahin:-Qaraxii ka dhacay Muqdisho iyo Siyaasiyiin lala eegtay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Faah-faahin:-Qaraxii ka dhacay Muqdisho iyo Siyaasiyiin lala eegtay
Waxaa goordhaw qarax nuuca miinada dhulka lagu aaso uu ka dhacay agagaarka Isgooska Beexaani ee degmada Shibis ee Gobolka Banaadir, waxaana qaraxan lagu soo waramayaa in uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Qaraxa ayaa la sheegay in lala eegtay gaari ay la socdeeen Xildhibaan hore Muxudiin Xasan Afrax iyo siyaasiga Xuseen Caraale, waxaana qaraxa uu ahaa mid hareeraha laamiga lasii dhigay.
Inta la xaqiijiyay qaraxan waxaa ku dhintay afar askari oo kamid aheyd ilaalada siyaasiyiinta la qarxiyay, waxaana warar soo baxaya sheegayaan in qaraxa ku dhaawacmeen labada Siyaasi Muxudiin Xasan Afrax iyo Xuseen Caraale.
Ciidamo katirsan booliiska Soomaaliya ayaa si deg deg ah u gaaray goobta uu ka dhacay qaraxa miino, waxa ayna booliiska halkaasi ka sameeyeen howlgalo baaritaano ah oon la ogeyn natiijada kasoo baxday.
Qaraxyada miino ee ka dhacaya magaalada Muqdisho ayaa mudooyinkan noqday kuwa sii badanaya, waxaana inta badan qaraxyadan lala eegtaa gaadiidka ay la socdaan masuuliyiinta iyo ciidamada
Maqaal horeDEG DEG:-Qarax ka dhacay Muqdisho
Maqaal XigaDowlada Iraan oo dil ugu hanjabtay Trump